Duqa magaalada Seçer wuxuu ardayda u sharaxay Mashruuca Mersin Metro | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinGudoomiyaha Seçer wuxuu ardayda u sharaxay Mashruuca Mersin Metro
26 / 02 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, Khariidadaha, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, VIDEOS
madaxweynaha sirta ah ayaa ardayda u sharraxay mashruuca metro-ga
Duqa Degmooyinka Magaalada Mersin Vahap Seçer wuxuu la yimid ardayda jaamacadaha barnaamijka loo yaqaan "Duqa Magaalada Seçer wuxuu usheegayaa Nidaamka" Mersin Rail System "casuumaad ay ka heleen Kooxda Ardayda Injineeriyada Rayidka. Isaga oo ka jawaabaya su'aalaha ardayda ee Nidaamka Tareenka ee Mersin, Duqa Magaalada Seçer wuxuu la wadaagay dhammaan macluumaadka iyo nidaamka ku saabsan mashruuca. Duqa Seçer wuxuu yidhi, ma jiraan wax la mid ah oo mashruuca tareenka dhulka hoostiisa lagu hayo oo ku yaal shelf, Duqa Seer wuxuu yidhi, "Waxaa laga yaabaa inay jiraan diidmo sidan oo kale ah oo ku saabsan howlaha qandaraaska. Haddii kale, annagu ma hayno tallaabo dib ugu noqoshada mashruuca tareenka dhulka hoostiisa. "Ma jiro wax la mid ah oo ah in hindisada la waayo, qandaraaska ma sii socon doono, mashruuca metro-ka wuxuu ku yaal shelf," ayuu yidhi.
“Jaamacada macnaheedu waa sayniska, dhaqanku waa farshaxan”
Xarunta Dhaqanka ee Jaamacadda Toros ee Bahçelilevler Campus, oo ay weheliso Madaxweynaha Seçer, Guddoomiyaha Guddiga Maamulka Jaamacadda Toros Yusuf Sertaç Özveren, Ku-simaha Jaamacadda Toros Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Ku-xigeenka Duqa Magaalada Yenişehir Hacı Bayram Battı, xubin ka tirsan Golaha Xisbiga CHP Fatma Güner, Madaxa Duqa Degmooyinka CHP Mersin Adil Aktay, Madaxweynaha degmada CHP Yenişehir Tayar Tahiroğlu, xildhibaano, aqoonyahanno fara badan iyo boqolaal arday ayaa soo xaadiray. Waxaa dajiyay Prof. Dr. Barnaamijka Süleyman Türkel, Mersin Metropolitan xafiisyada dawlada hoose iyo mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale uga jawaabay su'aalaha farsamada ardayda. Madaxweyne Seçer, isaga oo muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in uu la joogo ardayda dhigata Jaamacadda Toros, oo ah mid ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu sharafta badan gobolka, ayaa yidhi, “Jaamacaddu macnaheedu waa saynis, jaamacad macnaheedu waa dhaqan, farshaxanimo. Jaamacaddu macnaheedu waa dhalaal, jaamacad macnaheedu waa dimuqraadiyad, jaamacadda macnaheedu waa xuquuqda aadanaha, jaamacadda macnaheedu waa isbeddel, isbeddel, kacdoono iyo hal-abuurnimo. Markaad dhaho jaamacad, waxaad ka fikiri kartaa waxkastoo dunida ku wanaagsan. Waxay si dhakhso leh ugu dhaqaaqaysaa inay noqoto magaalo jaamacadeed oo ku taal Mersin. Waxaan leenahay 4 jaamacadood iyo in kabadan 60 kun oo arday. Saynisyahanno qiimo badan ayaa tababaran ardaydaas. Meesha ay dhalinyaradu ku ifiso, iftiin baa jira, dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba way ku badan tahay. "Mersin waxaa ka jira fursado dhan oo u baahan qofka dhalinyarada ah inuu wax ku barto jaamacada ama uu ka dhigo mid soo jiidasho leh."
“Waxaan wali ka wada hadaleynaa in Mersin uu jiro iyo in kale. Laakiin waanu go’aansannay. Waxaan u qiimeynay tan sidii maalgashi ay ahayd inay ahayd ”
Isaga oo ka hadlayey nidaamka metro-ga, Madaxweyne Seçer wuxuu sharraxay in taariikhda nidaamkani uu ku xirnaayo dhulka hoostiisa ee London illaa 1860-meeyadii. Seçer wuxuu yiri, “Si kale haddii loo dhigo, waxaan uga hadlaynaa nidaam jira qiyaastii 1.5 qarni. Nasiib darrose, waxaa jira aragtiyo sidan oo kale ah oo ay weli jiraan kuwa u arka maalgashiga metro ee Mersin inuu yahay maalgashi aan loo baahnayn, maalgashi aanna ahayn maalgashi hore. Waxaan ku jirnaa xilligii warshadaha 4.0. In kasta oo aan maalgelinayno si aad u kala duwan, teknolojiyad cusub oo aad u badan, bulshooyin cusub oo leh bulshooyin horumarsan, gaadiid dadweyne, ayaan wali ka wada hadalnaa haddii aanu Mersin lahayn metro iyo in kale. Laakiin waanu go’aansannay. Waxaan u qiimeynay tan sidii maalgashi ay ahayd inay ahaato ”.
“Fikradda guud ee aan adeegsan doonno waa inay ahaato nidaam tareen”
Seçer, oo sii watay khudbadiisa isagoo ka hadlaya mashaariicda metroga ah ee magaalooyin kala duwan oo lagaga hadlay ajandaha, ayaa wuxuu u sii socday sida soo socota:
"Daydo Aad kala duwan leh nidaamka tareenka ee taariikhda Turkey si uu noloshiisa ugu dhibco badan. In kabadan 160 magaalo oo sumcad ku leh adduunka oo dhan, nidaamka tareenka ayaa hadda si firfircoon uga shaqeeya. Khasab maahan in la jahwareero fikradaha. Khabiir kuuma ahan mowduucan, laakiin sida duqa magaalada waa inaad ogaataa mowduuc kasta. Waa inaad ogaataa waxa aad sameyneyso, iyo go'aamada aad hoosta ku soo gashid. Fikradda guud ee aan adeegsan doonno waa inay ahaato nidaamka tareenka. Ma aha tareen dhulka hoostiisa mara, ma tareen fudud, ma taraam. Kuwani waa moodallo kala duwan. Mashruucayaga nidaamka tareenka ee ku saabsan Mersin, oo aan hadda sharxi doonno, waxaan ku adeegsan doonnaa moodallo kala duwan 3 marxaladood oo kala duwan. Mid waa nidaamka tareenka dhulka hoostiisa mara, mid waa heerka tareenka halka kan kalena uu yahay nidaamka tareenka. Farsamada halkan lagu sharxay waxaa lagu qeexay inuu yahay taraam leh awood dhan ilaa 15 kun oo rakaab ah. Haddii aad sidato rakaab saacaddii inta u dhexeysa 15 iyo 30 kun, waxaad ugu yeeraysaa nidaam tareenka fudud. Haddii aad sidato rakaab saacadiiba khadka aad dhistay in kabadan 30 kun, tan waxaa lagu magacaabaa tareenka culus ama metro. Markaa aan ugu yeerno nidaamka tareenka guud ahaan. ”
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in nidaamkan, oo hadda ajandaha yahay oo maraya marxaladdii ugu horreysay, uu leeyahay qaab dhismeedka tareenka oo qiyaastii 13.4 kiiloomitir ah, ayuu yiri Seçer, 2. Qaab dhismeedka tareenka 9 km u jira wejiga. Tani waa heer. Khadkan oo ka bilaabaya hore degmada Old Mezitli waa nidaam tareen oo dhulka hoostiisa ka socon doona ilaa 13.5 kilomitir. Waxaan tan ku sameyn doonnaa meesha ugu horeysa. Markaa waxay ku sii socon doontaa jihada Siteler woqooyi qiyaastii 1 kiiloomitir u jirta saldhigga baska hore. Waxaan ku tilmaami doonaa nidaamkan halkaas. Wajiga 2 ayaa halkaas ka dhacaya iyada oo heerkan ah. Markaa dhulkay u baxdaa. Waxay ka sii socotaa Isbitaalka Magaalada illaa xarunta basaska cusub. Kani waa xariiqa 9 kilomitir ee qadkayaga. Mid kale wuxuu ka bilaabmaa barta Fairground, oo ku taal soohdinta Yenişehir. Laga soo bilaabo halkaas, waxaa jiri doona khadka ku dhawaad ​​34 kiiloomitir, oo ay ku jiraan 7.25th Street, Isbitaalka Jaamacadda, Jaamacadda iyo Jaamacadda Street, oo ah dariiqa-ka-line-ka. Isugeyn 30 kiiloomitir oo nidaamka tareenka ah. Aynu siino nambarada qiyaastii. Aynu ka wada hadalno wajigan koowaad halkan. Diyaar garow ayaa u socda labada qaybood ee kale. Hada, daraasado dhulka ah ayaa socda. ”
"Waaxda dhismaha ee Turkey ayaa la kulma dhibaatooyin halis ah"
Isagoo sheegay in hindisadu ay soo gashay nidaamka 25-kii Janaayo, Seçer wuxuu yidhi, “Si kastaba ha noqotee, hindisadaani waxay u dhigantaa 27-ka Febraayo. Waxaan u isticmaalnay lacagteena 20-ka maalmood xaq-u-dhac sababtoo ah fayraska corona-da. Waxaan sida Mersin, ee Turkey size this, annaguse waxaannu nahay hab koowaad ee magnitude sida qiimaha hindisada. Si kale haddii loo dhigo, shirkadda qandaraaslaha ah ayaa labadaba heli doona maalgelinta waxayna dhisi doonaan tareenka dhulka hoostiisa. Halkan waxaan ku haynaa tan qeexitaanka hindisada inta hawshani socoto; Haddii aan helno ilo dhaqaale oo la awoodi karo, taas oo ah, qiimaha kheyraadka maaliyadeed ee aan heli doonno wuxuu ka yaraanayaa wixii ay shirkaddu na siisay qandaraaskan, waxaan ku bixin doonnaa maalgelin shirkaddaas, dhismaha waxaa sameyn doona shirkadda kale. Lugta maalgelinta ayaa aad muhiim ugu ah halkan. Xaqiiqdii, isagu waa kan ugu muhiimsan. Ama conjuncture iyo Turkey, labada hadda bixisaa xaaladda dunida run ahaantii waa deegaan ku haboon in la sameeyo noocan ah maalgelinta. waaxda dhismaha ee Turkey ayaa la kulma dhibaatooyin halis ah. Jardiinooyinka gawaarida ee shirkadaha qiimaha badan, culus, adag ee adag ayaa sugaya. Waxay rabaan inay ku dhisaan faa'iidooyin aad u yar. Dhanka kale, lugta maalgelinta ayaa ah arrinta ugu muhiimsan. Waxaa jira lacag aad u badan oo khatar ah adduunka. Haddii aad dalkaaga xasillooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale ka hesho, agabyadan ayaa kuugu imaan kara qiimo aad u yar.
"Hay'adaha maaliyadeed ee Shiinaha oo aan bixin doono lacagta ugu jaban"
Isaga oo ka hadlaya waxyeelada fayraska Corona ee adduunka isla markaana sheegaysa in hay'adaha maaliyadeed ee Shiinaha yihiin isha ay ku bixin doonaan lacagta ugu jaban, “Saamaynta fayraska Corona ee adduunka ayaa sii socda. Hay'adaha maaliyadeed ee Shiinaha ayaa bixin doona lacagta ugu jaban. Waxaan dib u dhignay qandaraaska muddo 20 maalmood ah sababta oo ah xaaladaha aan caadiga ahayn ee halkaas ka jiray ayaa dhibaato na geliyay. Waa xuquuq noo sharci ah 20 maalmood oo kale. Markii aan nidhaahno aynu isticmaalno, mid baannu isla eegnay, oo shirkad halkan lagu magacaabay, shirkad la yidhaa 'Dev İnşaat' ayaa rafcaan ka qaadanaysa 10-ka Janaayo iyo Hay'adda Iibsiga Dadweynaha sababo farsamo awgood; baajinta hindisada sabab u muuqata mid aan macno lahayn. Aan idhaahdo soo koobid. Shirkaddan 'Dev İnşaat' waxay galaysaa maado aan xadidanayn. Waxaan sidoo kale baarnay tan. Shirkadani ma aysan qaban mashruuc noocan oo kale ah. Looma arko shirkad khatar ah oo leh khibrad dhisme aad u weyn. 'Adeeggu wuxuu muhiim u yahay ogeysiiska. Si kastaba ha noqotee, maaha waajibaadka sarkaal kasta inuu ka dhigo degmada inay ku kiciso amaahdo aan la hubin, oo qodobbadaani waa kuwo lagu xadgudbay hawsha hadda jirta lafteeda. Waa maxay sababta salka ku haysa xayeysiiskaas dulmiga ah ee noocaas ah? ' ayuu yiri. Waxaan galaynaa deyn aad u weyn. Tani waxay qusaysaa shirkadda. Waan cambaareyneynaa howsha. Hay'adda wax soo iibsiga dowladu waxay kansal galeysa qandaraaskan diidmo aan micno laheyn. ”
"Waxaan sugeynaa go'aan macquul ah oo hey'adda soo iibsiga dowladeed"
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in arrinta si khaldan loogu faafiyay dadweynaha warbaahinta qaar, qoraal, warbaahinta muuqaal ah iyo telefishan, Seçer wuxuu sii waday sida soo socota:
“Mashruucu wuxuu ku dhacay darbiga”. 'Mashruuca, qandaraaska dhismaha dhulka hoostiisa mara' waa la keydiyey '. 'Qandaraaska mashruuca waa la joojiyay'. Muuqaal bulshada dhexdeeda ah oo ah in haddii hindisadan mar kale la qaban doonin ama mashruucan aan la qaban doonin. Tani waxay ahayd warar been abuur ah. Waxay ahayd sheeko war si fiican aan loo aqrin, si fiican loo falanqeeyay, oo aan si wanaagsan loo qiimeyn. Sidaa darteed, waxaan u baahan nahay inaan iftiimiyo dadweynaha. Waxaa jiri kara diidmo noocaas ah geedi socodka hindisada. Ma noqon doonto kuwayaga koowaad iyo kan ugu dambeeya. Waxaan u socdaa hindisooyin badan. Hadda Tevfik Sırrı Gür High School ayaa sidoo kale halkaas ka maqnaa. Horeyba walxaha xafiisku uma eka wax tartiib tartiib ah. Saxiixu runtii waa 3 bilood, 5 bilood. Waad tagaysaa, waad imanaysaa, waad eegaysaa. Cayda qaar baa noogu yimaada. Waxaa jiray rafcaan. Qandaraasyadaada ayaa dib loogu dhigay muddo 20 maalmood ah, iyadoo ku soo qaadaysa maaddada si kooban oo faahfaahin ah. Kuwani waa wakhti lumis. Haddii kale, annagu ma hayno tallaabo dib ugu noqoshada mashruuca tareenka dhulka hoostiisa. Ma jiraan wax la mid ah oo ay hindisehiisu ka lumayaan, hindisada mar labaad ma sii socoto, mashruuca metrooga wuxuu ku yaal shelf. Codsiga dib u dhigista cusub ee aan qaban doonno, qandaraaskan wuxuu noqon doonaa bartamaha bisha Abriil. Hadda waxaan sugeynaa go’aanka caqliga leh ee Hey'adda wax soo iibsiga dowladeed. Maanta, waxay imaan doontaa berri. Waxaan ku sameyn doonnaa waxoogaa isbeddelo ah tilmaamaha ku saleysan sababaha naloo siiyay. Hawsha hindisada mar labaad way sii socon doontaa. Mar labaad, haddii aan tixgalinno muddooyinka tincture-ka ee la filayo ee uu sababa feyraska Corona, hindisadan ayaa dhici doonta xitaa marka lagu jiro shuruudahan muddadii aan filaynay, oo ah, badhtamaha Abriil. Kaliya mashruucan kuma qaadi karno rakaabka hal dhibic oo Mersin una aado meel kale; run ahaantii, waxaan soo qaadan doonaa qaab dhismeedka dhaqan-dhaqaale oo ay weheliso mashruucan. Hadda, Mersin, gudahalerler, Gündoğdu, gobollada kale, Mezitli, Jaamacad, meel kasta oo uu ku nool yahay ama waqtigiisa inta badan ku qaato, muwaadin Mersin wuxuu gaari karaa meeshii la rabay waqti aad u gaaban, jawi deggan, nabadgelyo leh, jawi wanaagsan. heli karaan. Badeecadu way noolaan doontaa. "
“Metro micnaheedu waa horumar”
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in Metro noqon doonto maalgashi muhiim ah, Seçer wuxuu sii waday khudbadiisa sida soo socota:
“Metro waxay noqon doontaa maalgashiga ka caawin doona ciribtirka dhammaan cabashooyinkaas. Hadaad dhahdo waxaan nahay magaalo sumad leh, waxaa loola jeedaa maalgashi. Metro micnaheedu waa horumar, horumarin macnaheedu waa Metro micnaheedu waa ilbaxnimo. Waa inaad sidan u qaatan. Maaha wax sax ah in dhacdadan laga eego aragti ganacsi marka loo fiiriyo sidii nidaamyada aan u sameyn doonno awoodda rakaabka waxay nagu soo noqon doonaan sidii maalgashi macquul ah. Dabcan, sidoo kale waan xisaabinay. Awooda rakaabka maalinlaha ah ee xarunta Mersin, oo ka kooban 2030 degmo oo aan saadaalinay 4, waa 1 milyan 200 kun. Qiyaastii 13.5 boqolkiiba wadarta awooda rakaabka maalinlaha ah ee qadkaan 60 km ee Mersin kaligiis ayaa saaran wadadaas. Waqtiga xaadirka ah, waxaa Mersin jooga ku dhawaad ​​800 oo rakaab maalinle ah. 60 boqolkiiba tani waa qiyaastii 450-500 kun oo rakaab ah, xitaa 13.5 kiilomitir oo ah basaska degmada, basaska dadweynaha, gawaarida khaaska ah, basaska yar yar iyo gaadiid fara badan. Waxaan soo xisaabinay waxaas oo dhan. Waqtigaan la joogo, waxaa jira saacado u dhexeeya 18-20 kun oo saacadood iyo xitaa 22 kun oo saacadood waddadaas inta lagu gudajiro saacadaha ugu badan. Awooda rakaabka ee nidaamkan 13ka kiiloomitir ee ugu horeeya ee la dhisayaa ayaa durbadiiba gaadhay 15. Intaan sharraxayey uun, waxaan is idhi taraamka ilaa 15 kun oo rakaab ah iyo nidaamka tareenka fudud inta u dhexeysa 15-30 kun. Tareenka fudud ayaa gaadhay xadka. Muddada laga bilaabo bilowga nidaamkan ilaa dhismuhu wuxuu noqon doonaa 3.5 sano. Waxaan siinaa xulashooyin ka soo horjeeda dayacaad kasta 6dii biloodba. Marka, marka la isku daro, dhismahaani wuxuu qaadan doonaa 4 sano. Waxay gali doontaa adeega ugu badan sanadka 2024. Ilaa iyo markaa, haddii celceliska awoodda rakaabka uu yahay 15 kun, waxay noqon doontaa 20 kun. Waxay gaari doontaa 25-27 kun saacadaha ugu sarreeya, markii howshaas horey loo howl galiyay iyo sanadka 2030, awooda aan ku qaadanay Mersin wuxuu gaari doonaa 1 milyan 200 kun maalin gudaheed. Tani waa mid muhiim ah. ”
Isagoo tilmaamaya inay tahay inay maal gashadaan sidii ay tahay Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, ayuu Se ,er yiri, “Mersin Metropolitan Dowlada ma bixin doontaa qiimahan? Sababtoo ah waa maalgashi dhab ah. Ma bixin karo lambarka hadda. Sababtoo ah waxay ku jirtaa marxaladda jilicsan. Haa, waa maalgashi muhiim ah, maalgashi aad u tiro badan, laakiin dabcan waanu xisaabinaynaa. Dhismaha ayaa ku dhamaan doona 4 sano. Waxaan dhahnay inta u dhaxaysa 3 iyo badh, 4 sano. Ma bixin doonno lacag bixin. Ma qaban doonno 2 sano oo dheeri ah, nidaamka ayaa la shaqeynayay, mudada laga soo bilaabo taariikhda markii qodista la garaacay illaa taariikhda aan bixin doonno waa 6 sano. 2 sano gudahood, nidaamkan ayaa shaqeyn doona. Markaa marka rakaabku bilaabo inuu wado, nidaamkan ayaa hadda bixin doona dib-u-warshadayn. Maaddaama ay tahay dakhli abuuraya maalgashi, dakhli ayaa bilaabaya inuu soo baxo annaguna waan bixin doonnaa 11ka sano ee hartay. Waxaan garaacnay pickaxe, muddada udhaxeysa dhamaadka deynta waa 17 sano. Waa inaan maal gashanaa. Waa inaan deynsanaa. Waxaan maqalnaa dhaleeceyn ku saabsan arrintan. Dowlada hoose ee Mersin waxaa saaran culeys weyn. Sideed sameyneysaa haddii aadan wax deynin inta aad sameyneyso maalgashiyo waaweyn? ” siiyey tibaaxaha.
"Tareenka dhulka hoostiisa, waxa aad ku qabataa baarkin dhigashada iyo marinka dhulka hoostiisa"
Isagoo sheegay inay jiraan arrimo muhiim ah oo dheeri ah oo ay tahay in la bixiyo tareenka dhulka hoostiisa mara, ayuu yidhi Seçer, “Waxaan yeelan doonnaa 13,5 kilomitir iyo xitaa 11 saldhig. 10 ka mid ah waxay lahaan doonaan mootooyin iyo baarkinno baaskiil, 10-na waxay lahaan doonaan xarumo-sharciyeedyo. Jid-gooyo dabiici ah ayaa ku dhici doonta dhismahan. Hadda lugeeyayaashu waxay isticmaali doonaan marinka dhulka hoostiisa mara. GMK way is dejin doontaa. Waxaan ka nimid dhulka hoostiisa ee GMK waxaana jiri doona baarkin gaari doona 6 dhibcood. Waxaan yeelan doonnaa baarkinka 1800 goobood oo leh 6 baabuur. Si kale haddii loo dhigo, waxaad maalgashi ku sameyneysaa dhulka hoostiisa, laakiin sidoo kale waxaad ku sameyneysaa baarkinka gawaarida gawaarida la dhigto, marka lagu daro waxaad ku sameyneysaa marinka dhulka hoostiisa ah, dhanka kale, waxaad dadka ugu jiheysaa gawaarida sida bushkuleetiga deegaanka u fiican. Tusaale ahaan, halkaas ayuu la dhigan doonaa mootadiisa, ayuu raacaayaa tareenka dhulka hoostiisa mara, haddii uu doonayo Çamlıbel, haddii uu doonayo inuu tago Isbitaalka Magaalada, haddii uu doonayo inuu tago Isbitaalka Magaalada, ama haddii uu doonayo inuu tago wado kale, ayuu yidhi.
4 buundooyin cusub oo war wanaagsan u ah Mersin!
Duqa magaalada Seçer, oo isaguna war wanaagsan ka siiyay inay samayn doonaan isku-socodyo cusub, ayaa yidhi, “Waxaan ka shaqaynaynaa taraafikada Mersin. Ma doonayo inaan qeexo wax dhibco xilligan xaadirka ah. Waxaa jiri doona isgoysyo cusub. Sida ku xusan amarka muhiimada, 4 isgoys oo isgoysyada hada ah ayaa la aqoonsaday. Mid ka mid ah dhismaha ugu horreeya ayaa bilaaban doona sannadkan. Inta lagu jiro 4ta sano ee ugu horreysa, waxaan garowsan doonnaa ugu yaraan 2. Haddii miisaaniyaddeena iyo muddadayadu u dhigantaa tan, waxaan ku dhex ridi doonaa isgoysyada buundada 4taas sano gudahood. Mashaariic qiimo badan oo muhiim ah ayaa ina sugaya oo kaliya ma ahan bartamaha Mersin laakiin sidoo kale Anamur ilaa Tarsus. Waxaan si daacadnimo ah ugu shaqeynaa Mersin anagoo ku darin habeenkeena maalinteena. Kaliya ogaanshaha iyo rumayntaada waxay ku siinaysaa xasil maskaxeed. Waxaan rajeyneynaa, inaan Mersin adeegyo aad u wanaagsan ku qaban doonno codsiyada aan sameyn doonno. ”
Filimka Dhiirrigelinta Wadada Mersin Subway
Khariidadda Mersin Metro
Duqa Magaalada Mayor Sahin wuxuu soo bandhigay mashruuca Gaziray-Metro
Madaxweynaha Gökçek ayaa u sheegay mashruuca telefishinka ee Ankara (Video)
Duqa magaalada Arslan Yozgat ayaa ku saabsan mashruuca Ropeway
Duqa Magaalada Yılmaz ayaa sharxay mashruuca BRT ee socda
Madaxweyne Turel, 3 Xaafadda 3. Muujiyay Mashruuca Nidaamka Tareenka marxaladda
Munaasabada dhalashadiisa ayaa u sheegay ardayga tareenka
Xubin ka tirsan kuliyaddaha jaamacadda ee Anadolu Professor A marti. Dr. Si toos ah ula xiriir Doğan
Binali Yildirim wuxuu ku sheegay mashruuca Marmaray ee CNN International
Kaynak ayaa ka sheegay mashruuca taraamka Fethiye
Mashruuca IETT Metrobüs ee Singapore
Mayor Mayor Topbas wuxuu ku dhawaaqay mashruuca Metro Metro
Madaxweyne Xassan oo wacad ku maraya Mersin Metro
Duqa Seçer: 'Shaqada dhabta ah ee Mersin Metro ka dib'
Gudoomiyaha Seçer wuxuu sameeyaa Baaritaano ku aadan Dekadda Mersin
Maanta oo Taariikh ah: 6 Abriil 1941 Yugoslavia-kii Jarmalka
Magaalooyinkee laga mamnuucay soo gelitaanka iyo bixitaanka? Muddo intee la'eg ayaa mamnuucu socon doonaa?